အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Ophelia သည် Galicia သို့ရောက်ရှိနိုင်သည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Ophelia သည် Galicia သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်
ငါတို့ထင်ထားတာက "ပုံမှန်" ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒီအချိန်မှာပုံမှန်အတိုင်းအပူချိန်ထက်မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြင်းမရှိပေမယ့် Opheliaအတ္တလန္တိတ်ဟာရီကိန်းရာသီ၏အပူပိုင်းမုန်တိုင်းသစ်။ စပိန်အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင်သိသိသာသာမိုးရေချိန်များလျော့ကျစေနိုင်သည်.
၎င်းသည်ဆိုင်ကလုန်းများအများအားဖြင့်လိုက်လေ့ရှိသောအနောက် - အရှေ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲအဇိုရီးဆီသို့ ဦး တည်သွားသောကြောင့်၎င်းသည်ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
1 Ophelia, အလွန်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း
ပုံ - Meteociel.fr
၂၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောနွေးထွေးသောသမုဒ္ဒရာသည်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့်ကြာရှည်စွာမနေရဘဲမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်း Ophelia သည်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ၏ဤအပိုင်းတွင်သမုဒ္ဒရာမျက်နှာပြင်၏အပူချိန်သည်ဖြစ်သင့်သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်းအပူပိုင်းဒေသရေထုတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပူချိန်ကဲ့သို့မုန်တိုင်းကြီးပြင်းရန်မလုံလောက်ပါ။ သော်ငြားလည်း, အကယ်၍ ၎င်းသည်အမြင့်ရှိအေးသောလေနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လျှင်၎င်းသည်မတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်.
ပုံ - Accuweather.com
သူဘယ်သင်တန်းကိုတက်မည်ဆိုတာမရှင်းသေးပါ, ဒါပေမယ့်သူကအနောက်ဘက်ကိုသွားမယ့်ကြောင်းကိုလူသိများသည်။ ဘယ်မှာအတိအကျ? မသိရပါဘူး ၎င်းသည်ဂလက်စီယာ၏အနောက်မြောက်ဘက်ကိုထိခြင်းသို့မဟုတ်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့ ဦး တည်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သံသယများစွာရှိပါသည်။ အခုချိန်အထိ, အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းမှာဖိအား ၉၉၆mb နှင့်လေတိုက်နှုန်းအမြင့်ဆုံး ၁၂၀ ကီလိုမီတာရှိသည်.
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မနက်ဖြန်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင်လေသည်လေပြင်းမုန်တိုင်း ၁၅၀ ကီလိုမီတာထက်ကျော်လွန်သောမုန်တိုင်းအမျိုးအစားကိုရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း ဂါလိလဲပြည်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါတနင်္ဂနွေနှင့်တနင်္လာနေ့အကြားဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာ၊ ၎င်းသည်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သာမကအပူပိုင်းဒေသဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည် Non- အပူပိုင်းဒေသရေတွင်ဖွဲ့စည်းတော်မူပြီးမှ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » ဆိုင်ကလုန်းများ » အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Ophelia သည် Galicia သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်